Mkpa Ihe nkiri Efere (BM) Emeputa | Yinrich
.Lọ > Ngwaahịa > Akụrụngwa kichin > Mkpa Ihe nkiri (bm)
osi ite ihe nkiri
Ezubere maka ihe eji esi nri nwere protein ma ọ bụ ihe ndị na-ekpo ọkụ. Oge obibi nke ngwaahịa a na obere ihe eji esi nri ihe nkiri dị mkpụmkpụ. Ezubere usoro a maka nrụgide nkịtị, nrụgide, agụụ ma ọ bụ nri post-agụụ. Ojiji nke ihe eji esi ihe nkiri sịnịma nwere ike inye nsonaazụ esi nri ngwa ngwa, nsonaazụ ya dịkwa mma. Mmiri a ngwa ngwa pụtara na usoro ntụgharị shuga ma ọ bụ ihe ọ daụ anyụ mmiri ara ehi ọ bụla na-ere obere n'oge usoro nri ruo na nke ikpeazụ.
Yinrich bụ ezigbo onye na-eme ihe nkiri eserese kacha mma, na-enye akụrụngwa kichin, igwe juputara bisikiiti, ihe mkpuchi chocolate, na ihe esi nri ihe nkiri kacha mma.
Mkpa ihe nkiri na-esi nri (BM)
A na-enye ihe ngwọta shuga na-aga n'ihu na ngalaba nri nri BM, nke gụnyere pre-kpo oku, ihe ọkụkụ ihe nkiri, usoro nnweta agụụ, mgbapụta nri, mgbapụta mgbapụta na wdg. Ọnọdụ nri niile na-achịkwa site na njikwa PLC. A na-ebufe igwe niile site na nfuli na ebutu ya na-achịkwa ntụgharị ugboro ugboro.